Fitohizan'ny hafatra : Re: Raison de vivre: resaka filozofika
bandykely - 24/07/2013 12:23
Dia midika ve izany fa rehefa antitra isika, misotro ronono eto no tiako ambara (mihena ny préoccupation isan-tsokajiny) dia mety ho sambatra kokoa noho izao?
Manaiky ny voalazanao aho fa mba manitatra kely fotsiny.
Rehefa miverina ankizy isika dia hanakaiky ny fahasambarana, izany hoe rehefa mitony ny saina.
voromailala - 24/07/2013 13:17
bandykely>Raha araka ny fitenena aloha dia hoe miverina zazakely ny olona rehefa antitra.
Fa mbola tsy antitra aho (amin'ny ty fianako izao ity) dia tsy afaka mamaly ilay fanontiana , fa tsara hapetraka amin'ny olona antitra manodidina antsika angambany izay fanontaniana izay.
moi - 25/07/2013 07:31
Arakaraka ny toe-po io, ao ny antitra hilaza hoe Soa fa efa vita ny anay... ! Mba mihinana ny hatsembohana sisa... ao ny manina ny hatanorany foana... Ao ny tsy sambatra fa ny fahanterany no jereny...
Nefa mety ho tsotra kely ny hoe sambatra, oh : mba tsy mamo izy nody androany, mbola tsy manao sipa foana ny zanako, nilamina ny fodiana tamin'ny bus androany... manomboka amin'ny zavatra madinika ny fahasambarana.
bandykely - 25/07/2013 09:52
Misy koa rehefa miha-antitra ny olana vao miha-betsaka ny olana, dia tsy tonga lafatra ny hasambarana. Ohatra: tsy ampy ny tahiry nandritra ny fahatanorana ka sahirana mamarana faran'ny volana, zanaka manana olana (tsy an'asa, tsy manam-bady, tsy miteraka,...)...
Tsy hita ihany e...
voromailala - 25/07/2013 10:03
Ka izay indrindra no nahatonga any niteny hoe tsy tokony miankina amin'ny zavatra ivelany ny fahasambarana satria holasa fahasambarana mitsidika fotsiny (Plaisir éphémère).
Tokony ny "filàna" fa tsy ny "faniriana" no tanterahina. Satria raha "faniriana" no tanterahinao dia rehefa tanteraka iny dia miteraka faniriana hafa avoavo kokoa ary tsy hisy fahapaterany intsony raha tsy efa maty ianao.
bandykely - 29/07/2013 09:35
Tamin'ny week-end teo dia nihaona tamin'ny namana efa hatry ny ela izay aho. Misara-toerana lavitra izy sy ny vadiny fa mifankahita eo amin'ny indray na indroa isan-taona eo noho ny asa. Nandeha ny resaka dia nanontany azy aho hoe tsy dia manahirana loatra ve ny fitantanana ny tokan-trano amin'izany.
Dia hoy izy hoe: manahirana rehefa misy olana saingy amin'ny ankapobeny dia mande tsara ihany. Manana tanjona izahay hoy izy ka na mafy aza ny fisarahana toerana dia mino izahay fa ho sambatra ao aoriana kely ao ary hisy valiny ny safidy noraisinay izao.
Io valin-teny io no nikitika kely aho ka nozaraiko kely aminareo. Ny tiako holazaina dia hoe: tsy ny androany ihany koa no mety atao hoe fahasambarana, "fikatsahana tsy misy fetra" angamba no azo hilazana azy.
voromailala - 29/07/2013 10:09
bandykely> Io ilay lazain'ny psy hoe "ny fahasambatra dia ao anatin'ny fiandrasana", izany hoe rehefa manao zavatra ianao ahatratrana ilay tanjona dia mahatsiaro sambatra fa rehefa tratra ilay tanjona dia very ilay fahasambarana.
Lazao vaovao momba an'ireo olona ireo hoe rehefa tratra ilay tanjona hoe tena sambatra ve izy ireo, sa manao tanjona vaovao indray avy eo?
Ary io ihany koa no hampiasain'ny mpitarika fivavahana hoe mbola ho avy ilay paradisa, ilay maraina vaovao.
Kanefa ny fahasambarana sy ny parasisa dia eto sy ankehitriny ihany no mety ahatsapanao azy, satria ny eto sy ankehitriny ihany no azonao hovaina.
moi - 29/07/2013 11:09
hoy ny ohabolana hoe : ny mamy tsy miroa imolotra !
Mandalo zany ny mamy e, toy izay ny hasambarana.
Efa sambatra ange isika e, fa noho ny olona mitaha amin'olona hafa, amin'ny manodidina azy, na amin'ny firenen-kafa dia lasa mahita tsininy foana !
Raha tsy ao anaty mihitsy ny fanekena ny maha izy azy, dia lasa ny mainty hoditra te ho fotsy, ny lahy te ho vavy, ny mpiasa te ho sefo, ny sefo te ho sefon'ny sefo ...
Mino aho fa efa sambatra ianao io, fa ilay tsy mahasambatra anao no hitanao ! na dia ianao afaka mampiasa internet io aza efa sambatra e ; faritra maro ange mbola tsisy connexion e !
bandykely - 29/07/2013 12:04
voromailala>> Marina 100% mihitsy ny voalazanao hoe mandalo ny fahasambarana. Zavatra roa angamba no azo tsoahina:
- tahaka ny besoin ny fahasambarana, mandalo, dia miova ary te-hiakatra foana ("éphémère" hoy ianao tany aloha)
- mety azo atao hoe moyen ahafahana mampanantena olona ihany koa izy: "moyen de manipulation" izany angamba !!
moi>> Mampihomehy koa ianao amin'ilay hoe efa sambatra anie isika fa tsy te-hanaiky an'izany e. Marina 100% koa izay fa raha manaiky koa anie isika hoe sambatra tokoa dia tsy handroso intsony ary hahatsiaro ory ihany avy eo satria tsy hisy objectif/tanjona tratrarina intsony e.
Toy ny mpanan-karena ihany, mahatsiaro izy fa manana ary sambatra ara-materialy mihoatra amin'ny hafa, fa saingy matetika dia tsy sambatra izy ireo noho ny fitebitebena hiarovana ny harenany fotsiny aza.
moi - 30/07/2013 07:44
bandikely >> Zaho aloha ao anaty fahatsapana fahasambarana dia mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra hatrany e ! Tononkira an'ny mpanoratra Rado izay manao hoe
Zavatra tsy haiko ny mamohafoha andro sarobidy 'zay natolotrao
Fa 'reo andro ratsy maloka avokoa sisa mba tadidy avy taminao
Ampianaro aho ry Tompoko Tsitoha hahatsiaro koa 'reo soa natolotrao,
Ampianaro aho mba hitadidy koa 'rony lohataona 'zay nabaliakanao
Fa ao amiko hatrany ny tanjona ambony kokoa ka, tena ao anaty ny hanana ny lafatra.
Tsy adala sambatra ange za e (hi hi hi)
bandykely - 30/07/2013 10:19
moi>>> hihihihi....misaotra e
ravonjison - 31/07/2013 18:59
Mahaliana ahy itý resaka fahasambarana itý dia mba niditra aho.
Nohemiah a , miala tsiny aminao aloha aho satria niandry valinteny avy atý amiko angamba ianao mikasika ilay resaka " incarnation " tatsy ambadika tatsy , kanefa tsy nisy fotoana intsony aho. Mino aho fa mety mbola hirsaka izany ihany isika any aoriana.
Mikasika ilay fahasambarana indray dia izao. Io fahasambarana io dia miovaova izy io fa tsy valeur absolue akory. Miovaova arakany taona, ny toerana misy, ny hoenti-manana, ny nitaizana , ny zavamisy eo amin´manodidina. Noho izany dia be dia be ny zavatra mety mahasambatra arakaraka ny toerana misy ny tsirairay avy .
Koa satria isika dia zavaboary toy ny biby rehetra ihany, izany manana ny filána, ny fahatanterahan´io filána no mahasambatra voalohany. Rehefa tanteraka ireo filána , dia matetika miditra indray ny faniriana. Io filána sy faniriana io dia mikasika ny tena manokana ary koa mikasika ny fianakaviana, na mpiray tanána, na ny mpiray firenena ( Voir : inona moa no atao hoe fandrosoana, E D Andriamalala)
Hoan´ny lehilahy 30taona iray , rehefa tanterany ny filány sy ny faniriany dia sambatra izy , amin´io fotoana io aloha. Manambady izy avy eo, dia tsy maintsy ny hanatanteraka ny filána sy ny fanirian´ny vady aman-janany indray to tanjona mety hahasambatra azy , dia ezahiny ho tanterahiuna izany. Dia sambatra indray izy amin´io fotoana io...Any aoriana any dia ny hahasambatra ny mpiray firenena azy indray no tanjony dia milatsaka ho filoha izay: ny tanjoan izany dia ny filán´ny vahoaka ( sakafo hoanina androany sns...) , dia avy eo ny fanirian´ny vahoaka ( samy hanana fiara daholo ny tsirairay.).
Ireo filána sy faniriana mety hahasambatra eto dia mety hoe : nisy sakafo hoanina androany, afaka nanampy ny namany, afaka fanadinana ny tenany ny ny ankizy, nahavita trano, na hoe mba voaloha ny antsasaky ny trosan´i Dago
Hoan´ny pasitera iray, satria izy efa sambatra fa mino sy manana an´i Jesosy, dia ny mba hampino sy hampanana an´i Jesosy ireo mpiray tanána aminy indray no tanjona hahasambatra azy, noho izany katsahiny. Rehefa tratrany io , dia sambatra izy , fa tonga indray ny faniriana dia ny hampino ny mpiray firenena aminy no hahasambatra azy...
Ohatra 3 :
Sambatra ny bandikely iray satria nividianana baolina ( filána izy io satria be energie ny ankizilahy kely ka mila hampanaovana sport, faniriana koa izy io satria tiany ny milalao baolina ka rehefa manana iny dia afka milalao foana . Taty aoriana dia sambatra izy rehefa afaka CEPE, dia avy BEPCE, dia manana sipa, sns...
Ka hitantsika amin´ izany fa miovaova sy dynamique be ilay fahasambarana, arakaraka ny toerana misy ny tsirairay. Toy ny fitenitsika malagasy hoe : izay manana ariary, te hanana ariary roa avy eo.
Ka raha hiverenako ilay resaka fivavahana kristianina dia fomba iray complet azo hanatanterahina ilay filána sy faniriana io ka ahazoana ilay fahasambarana , izay mety miova atsy aoriana kely, toy ny fivavahana sy fomba sasany ihany koa...Betsaka izany ny possibilité mety azo ahazoana io fahasambarana io, saingy ny sasany efficace kokoa ary haingana, ny sasany kosa mitarazoka loatra.
Araka ny voalazan´i Bandykely antsy ambadika atsy dia mandray ny baiboly izy saingy tsy manao anjambany izay voalaza ao. Izany amin´ny voalaohany dia toa logique, hoan ´ny olona tsy mino. Kanefa araka ny efa voalazako, ny conceptin ´ny kristianisma dia complet, izany hoe feno tanteraka, ka raha misy lavina ny sasany ary ekena ny sasany dia tsy mety satria misy akony eo amin´ny fomba fisainana kristianina izany ( hoan´ny mpino).
Hoan´ny tsy mpino kosa dia azony atao ny manao izay tiany hatao.
voromailala - 01/08/2013 09:41
mba afaka hazavainao kely ve ty azafady fa tsy azoko tsara
Izay olona lasa manao pasitera izay dia sambatra daholo satria mino sy manana an'i Jesosy?
ary raha olona tsotra no mino sy manana an'i Jesosy ve dia tsy sambatra?
bandykely - 01/08/2013 10:34
Misaotra an'i Ravonjison amin'ny fanehoan-kevitra. Mahafinaritra fa hita hoe malalaka ny fomba fijerinao ary manaja ihany koa ny hevitry ny hafa ianao. Marina ihany koa ny voalazanao amin'ny ankapobeny.
Raha ny fahazoako ny voalazanao eto dia tsy misy afa-tsy possibilité roa: na mino, na tsy mino ny olona iray. Raha mino izy dia tokony hanaraka 100% izay voalazan'ny baiboly, sinon tsy mino izy izany.
Noho izany dia voakilasy ao anatin'ny "tsy mino" ny tenako raha araka ny fomba fisainana kristianina. Izaho anefa ao anatiko, convaincu fa misy Andriamanitra ary mino fa kosa mandà ny fanarahana 100% ny baiboly. "Hors catégorie" angamba izany no azo ametrahana ny cas-ko
Amiko ny concept rehetra dia tsy azo atao carré/binaire. Miankina amin'ny amin'ny cas an'ny tsirairay, ny contexte, ny environnement, ny fotoana,...daholo ny fandraisana ny zavatra rehetra. Eny fa na amin'ny informatique aza, izay miankina amin'ny règle stricte, dia tsy maintsy mi-considérer ireo paramètre ireo ny concepteur rehetra mba hahafahan'ny système iray mi-évoluer. Toy izany amiko ny fomba fisainana, tokony hisokatra sy ho évolutif foana mba handroso sy adapté amin'ny toe-trandro. Tsy mi-influencer akory aho fa milaza ny hevitro fotsiny an...Fa raha ny momba ny conception an'ny hasambarana indray dia 100% mitovy hevitra aminao aho.
ravonjison - 01/08/2013 12:35
Azonao tsara ny tiako lazaina, ny Andriamanitry ny kristianina lo lazaiko eto a. Mazava amiko koa ny tianao ho lazaina. ary misy hitovizana be dia be ny hevitsika satria izaho dia ouvert koa. Fa ny olana misy amin´io voalazano io hoe : izay tiako fotsiny no alaiko ao amin´ny baiboly dia misy tokoa. Tsy fantatro na aiza no hi-classer anao :
- mpino , nefa tsy manaraka tanteraka izay fampianarana ao amin´ny baiboly
- tsy mpino , fa kosa mahita fa misy zavatra tsara azo raisina ao ka manatanteraka izany.
Ny fahitako azy dia tsy mino ianao, fa kosa misy zavatra hiatano fa tsara ao dia arahinao. Tsy misy mihitsy ny maharatsy an´izany.
Fa raha ho classer-na ho mpino ianao , kanefa tsy manaraka tanteraka ny fampianarana ao dia tsy mety. Raha hanao an´izay daholo ny rehetra dia tsy hisy zavatra vanona ao fa hisy fanararaotana goavana. Ny resaka hoe tokony hisokatra, evolutiv sy hi- adapter amin´ny toetr´andro dia hekeko sy hitovizana, fa ny oloana hitako dia ilay fanararaotana , izany hoe ekenao ny zavatra sasany ao satria ahazoanao tombotsoa amin´izao fotoana izao, araka ny toerana misy anao. Rehefa miova ny toerana misy anao dia mety lavinao iny fa ekenao indray ny zavatra izay ahazoanao tombotsoa ( na dia nolavinao aza izany taloha ). Izany hoe hiovaova ny hevitra sy ny conception handraisanao ny kristianisma arakaraka ny toerana misy anao sy ny tombotsoa azonao ao. ...Tsy azo atao izay ary tsy mety.
Omeko ohtra ianao mba hazava tsara .
Ao amin´ny baiboly misy an´itý ( tsotsoriko a) : Misy lehilahy mpanankarena iray niansto an´i Jesosy ary nanontany azy hoe : mba te hanaraka anao aho, ka inona no tokony hataoko mba ahazoako hanaraka anao fa hoataoko izany ?
Jesosy namaly azy hoe : mandehana varoty na zarao amin´ny mahantra avokoa ny fananao dia, dia zarao amin´ny mahantra ny vola azonao amin´izany, dia avia manaraha ahy.
Misy antony pratique nahatonga an´i jesosy nilaza an´io. Izany hoe , Jesosy sy ny mpaiananay mandeha lava ka tsy misy fotoana hikarakarana harena izany. Ka raha te hiaraka aminy ny mpanankarena iray dia tsaratsara raha tsy manana harena be satria tsy hisy ny fotoana hikarakarana izany...Ankoatr´izay anefa dia milaza koa io fa tokony hifanampy, tokony hanampy ny mahantra ny mpanankarena.
Ny olona manankarena sasany anefa ( ary mety izay koa ilay ataonao) manao hoe : a a a, ny harenako rangahy tsy omeko olona mahantra izany, izaho tsy hanampy mahantra izay. Izaho ve nitsemboka sy lany rondoha nitrandraka an´io dia andeha homeko olona izany. ...Izaho mino tanteraka fa kosa tsy andeha omeko ny mahantra ny harenako.....Io izany ny toerana misy anao eto , mino ianao fa misy zavatra lavinao ao, satria tsy ahazoanao tombotsoa ilay izy eto. .
Ny mahantra sasany indray anefa , sur aho fa hekeny io satria misy ihany ireo mba mihay azy ireo, mahazo fanampiana maimaimpoana izy.
Any aoriana any anefa possible hoe lasa mahantra ianao, dia sur aho ho ekenao io satria amin´´ io fotoana dia manantena ianao fa jisy olona hanampy anao, izany hoe misy tombotsoa azonao aho.
Misy indray ny mifanohitra amin´izay: mahantra izy dia nekeny io fa nony lasa mpanankarena izy dia nilaviny ilay izy.
Izay indrindra no tsy mety , tsy azo atao ny hoe lavina na ekena io androany , fa any aoriana miova ny toe-javatra dia ho ekena indray na lavina indray ....
Io dia tokony ho ekena sy arahina tsy misy singanina , feno tanteraka, fa tsy hoe arakaraka ny hitiavako azy no hanarahako azy.
Misy resaka fahasambarana koa ao satria ny fanampiana ny mahantra dia anisan´ny mitondra fahasambarana.
bandykely - 01/08/2013 14:53
ravonjison>> Misaotra fa mazava tsara ny fanazavana ary mifankahazo tsara ny resaka, na dia tsy mitovy aza ny hevitra e.
bandykely - 06/08/2013 09:39
Aiza ny hevitry ny hafa ô?
vahiny2004 - 21/08/2013 10:54
Marina ny voalazanao , ny fampitahàna no "mamosavy" ny sain-tsika ka mahita fa tsy sambatra isika, kanefa io fampitahàna io ihany koa no tokony hahitan-tsika fa sambatra isika
Omaly aho izao nisy nanontany hoe "firy taona ny zanakao" : 15 ho aho, dia hoy izy "sambatra ianao " ... dia tonga saina aho hoe izy aza mahita ahy hoe sambatra izany
Betsaka ny zava-madinika mitranga eo amin-tsika nefa tsy hitatsika hoe tsara sy mameno ny hasambarana, fa mitady zavatra hafa hatrany hany ka tsy mety mahatsiaro sambatra